मतगणना भइरहेका १० नगरमध्ये ६ मा कांग्रेसको अग्रता. – Sabaikoaawaj.com
मतगणना भइरहेका १० नगरमध्ये ६ मा कांग्रेसको अग्रता.
बिहिबार, असार १५, २०७४ 6:56:31 AM	मा प्रकाशित
एजेन्सी, १५असार / बुधबार दोस्रो चरणमा निर्वाचन भएका प्रदेश नम्बर १,५ र ७ का विभिन्न स्थानीय तहमा मतगणना सुरू भएको छ। १ महानगरसहित ३३४ स्थानीय तहमध्ये केही गाउँपालिका र नगरपालिको पारम्भिक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार गणना भइरहेका १० नगरपालिकामध्ये ६ वटामा कांग्रेसले अग्रता लिएको छ।
डोटीका दीपायल सिलगढी र शिखर, कञ्चनपुरको महाकाली, बैतडीको मेलौली र रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा कांग्रेस उम्मेदवारले सुरुआती अग्रता लिएका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा २५० मत गन्दा नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार १०८ मत पाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत हरिकृष्ण श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले ५९ मत पाएको छ। २४ मत ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा छ।
उपमेयरमा एमालेले १०१ मत पाएको छ भने कांग्रेसले ६० मत ल्याएको छ। राप्रपाका उपमेयर उम्मेदवारले २६ मत पाएका छन्। चौथो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले मेयरमा १२ र उपमेयरमा १५ मत पाएको छ। डोटीको शिखर नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसले सुरुवाती अग्रता लिएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत दमनसिंह बिष्टले दिएको जानकारी अनुसार वडा नम्बर १ को १०२ मत गन्दा मेयरमा कांग्रेस उम्मेदवारले ६२ मत पाएका छन् भने उपमेयरले ६० मत पाएका छन्। एमाले मेयर उम्मेदवारले ३४ मत पाएका छन् भने उपमेयरले ३२ मत ल्याएका छन्। डोटीकै दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा पनि कांग्रेसकै सुरूआती अग्रता छ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को १०० मत गनिसक्दा कांग्रेसले मेयरमा ५८ मत र उपमेयरमा ४१ मत पाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नरनारायण पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार एमालेले मेयरमा १४ र उपमेयरमा ३६ मत पाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीले मेयरमा ११ र उपमेयरमा २ मत पाएको छ। दिपायलमा कूल १०४३० मत खसेको थियो।
प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देही जिल्लाको देवदह नगरपालिकामा १ सय मत गणना हुँदा कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार हिराबहादुर केसीले ३७ मत ल्याएका छन् भने एमालेका टिकाराम चापागाईँले २४ मत पाएका छन्। यहाँ कांग्रेससँग तालमेल गरेकोले माओवादी केन्द्रले मेयर उम्मेदवार उठाएको छैन।
बैतडीको मैलौलि नगरपालिकाको वडानम्बर १ को ११५ मत गणना हुँदा कांग्रेस मेयर उम्मेदवारले ४१ मत पाएका छन् भने उपमेयरले २८ मत पाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका एमाले मेयर उम्मेदवारले ३१ मत पाएका छन् भने उपमेयर उम्मेदवारले २४ मत पाएका छन्। माअोवादी केन्द्र भने मेयरमा २६ र उपमेयरमा १८ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेको निर्वाचन अधिकृत दीपक ढकालले जानकारी दिएका छन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेले संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा अग्रता लिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर १० को ३२३ मत गनिसक्दा मेयरमा एमालेका उम्मेदवारले १५९ मत ल्याएका छन् भने १२६ मत ल्याएर कांग्रेस उम्मेदवार दोस्रो स्थानमा छन्। माओवादी केन्द्रले १२ मत पाएको खाँदबारी नपाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत देबेन्द्र पौडेलले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
निर्वाचन अधिकृत पौडेलका अनुसार उपमेयरमा एमालेका उम्मेदवारले १४९ मत ल्याएका छन् भने १३७ मत ल्याएर कांग्रेस उम्मेदवार दोस्रो स्थानमा छन्। माओवादी केन्द्रले ११ मत पाएको छ । कैलालीका दुई नगरपालिका टीकापुर र भजनीमा भने उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम अगाडि छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत पुरुषोत्तम शर्माका अनुसार भजनी नगरपालिकामा १७० मत गन्दा फोरमका मेयर उम्मेदवारले ३९ मत पाएका छन् भने उपमेयर उम्मेदवारले ३४ मत पाएका छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका कांग्रेस मेयर उम्मेदवारले २३ मत र उपमेयरले २४ मत पाएका छन्। एमालेका मेयर उम्मेदवारले २१ मत पाएको छन् भने उपमेयरले १४ मत पाएका छन्।
कैलालीकै टीकापुर नगरपालिकामा २०० मत गन्दा फोरम नै अगाडि छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत मनप्रसाद रेग्मीका अनुसार टीकापुरका ५ र ६ वडाको मतगणना भइरहँदा फोरमका मेयर र उपमेयर उम्मेदवारले समान ५६ मत पाएका छन्।
दोस्रो स्थानमा एमाले कांग्रेस छन्। दुबै पार्टीका मेयर उम्मेदवारले ५२ मत पाएका छन्। तेस्रो स्थानमा रहेको माअोवादीले मेयरमा २१ मत पाएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता सुरुआती अग्रता लिएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर १ को ६३८ मत गनिसक्दा माओवादीले मेयरमा २८० मत र उपमेयरमा २७८ मत पाएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भिम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रलाई पछ्याउँदै कांग्रेसका उम्मेदवारले मेयर पदमा २३१ मत ल्याएका छन् भने उपमेयरमा २३६ मत ल्याएका छन्। एमाले उम्मेदवारले मेयरमा १०१ र उपमेयरमा ९७ मत पाएका कुँवरले ले बताए। यस्तै रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले प्राम्भीक अग्रता लिएको छ। सार्वजनिक भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले ५३, नेकपा एमालेले ४८ राप्रपाले ४२ तथा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले ३४ मत पाएका छन्। अहिलेसम्म २०२ मतको गणना भइसकेको छ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार १५, २०७४ 6:56:31 AM